साम्प्रदायिक सहिष्णुता घामपानीको सन्देश : दीपेन्द्र लामा (संवाद)
साइँली गीत ‘नाच माया’ इन्टरनेट रिलिज
ऋचा शर्मा–अर्पण थापा स्टारर ‘सिल्भर ब्यांगल्स’ प्रिमियर
मनोज पण्डितको ‘एक’ छायांकन सकियो, ज्योत्सना योगी लिड फिमेल
मेक्सिकोले जित्यो मिस वर्ल्ड, नेपाल टप १२ मा समेटियो
किम्फ फिल्म फेस्टिभल काठमाडौंमा सुरु, पहिलो दिन अष्ट्रेलियाली फिल्म ‘माउन्टेन’ प्रिमियर
‘चंगाचेट’ लाइफटाइम कलेक्सन : ५ करोड
‘छक्का पञ्जा ४’ केही वर्षलाई रोकियो | दीपक–मुन्द्रे–माग्ने गर्दैछन् ब्यानरबाहिरको फिल्म
‘गीत गजल’ फिल्म इन्ड–कल्याप्ड : हेर्नूस स्थिर तस्विरहरु
10th December 20180दयाहाङको ‘आप्पा’ जेठ २४ मा
9th December 20180साइँली गीत ‘नाच माया’ इन्टरनेट रिलिज
9th December 20180ऋचा शर्मा–अर्पण थापा स्टारर ‘सिल्भर ब्यांगल्स’ प्रिमियर
By Bisnu Sharma on	 29th March 2017 अन्तर्वार्ता
लामो समय सिनेमा समिक्षामा सक्रिय दीपेन्द्र लामा अब निर्देशक बन्दैछन् । उनी निर्देशित ‘घामपानी’ बैशाख १ मा रिलिज हुँदैछ । अन्तरजातिय प्रेमलाई पर्दामा चित्रण गर्न लागेका उनले फिल्म समिक्षा र फिल्म निर्देशनका आयामबारे हामीसँग कुरा गरे । उनले हामीसँग ‘घामपानी’ हेर्नुपर्ने सैद्धान्तिक र वस्तुगत कारण पनि पेश गरे । यो अन्तवार्तालाई तपाईं अडियोमा समेत सुन्न सक्नुहुन्छ ।
के ‘घामपानी’ समकालिन समाजसँग सान्दर्भिक छ ? जातिय विभेदको असरलाई कसरी फिल्ममा चित्रण गर्नुभएको छ ?
मैले यसमा सान्दर्भिक कथा नै उठाएको छु । जातिय विभेद भन्दा पनि एउटा जातले अर्को जातलाई नस्वीकार्ने भन्ने खालको मनोविज्ञान विकास भैरहेको छ । पहिला पनि थियो । त्यही मनोविज्ञानमा उभिएर अन्तरजातिय प्रेम विवाहको कथा मैले यसमा प्रस्तुत गरेको छु । कथा अहिले पनि सान्दर्भिक छ । यसले सहअस्तित्वको सवाल उठाउँछ । हामी समाजमा फरक जात र समुदायसँग मिलेर बसेका छौं । फरक जातबीचको सहिष्णुतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।
निर्देशकको रुपमा तपाईंको नियत जातिय द्धन्द्धको चित्रण गर्नु हो वा जातिय ‘एक्टिभिजम’ गर्नु हो ?
एक्टिभिजम अलिकति छ तर जातिय एक्टिभिजम होइन । विगतमा अन्तरजातिय भन्ने वित्तिकै बाहुन र दलितको कथा हुन्थे । यसमा चाहिँ बाहुन र जनजाति पात्रको सरल किसिमको द्धन्द्ध उठाएको छु ।
घामपानी कथा परम्परागत जस्तो लाग्दैन ? फिल्ममा कस्तो जोखिम र ताजा तत्व समेटिएको छ ?
विगतमा बाहुन र दलितको अन्तरजातिय कथामा फिल्म बन्थे । मैले चाहिँ बाहुन र जनजाति पात्रलाई उठाएको छु । किनभने, जनजाति र बाहुनले एकअर्कालाई पुरै स्वीकार्दा पनि स्वीकार्दैनन्, ठूलो बबन्डर पनि मच्चाउँदैनन् । यसमा बाहुन युवती र तामाङ युवकबीचको प्रेमकथा छ । केटीको बाउले समाधानको उपाय कुटनीतिक हिसाबले खोज्न थाल्छ । यसमा कथा अगाडि बढ्छ । यसमा परिवेश, भिजुअल ल्यांग्वेज, कलाकारले कसरी अभिनय गरेको छ भन्ने हिसाबले पनि अर्थ राख्छ ।
क्राफ्टभन्दा एजेन्डाले फिल्म थिचिएजस्तो लाग्दैन ?
मेरो कथालाई मैले ठूलो एजेन्डाको रुपमा प्रचारप्रसार गरेको छैन । सामाजिक अभियान चलाउन पनि खोजेको हैन । मेरो उद्देश्य भनेको हलसम्म आउने दर्शकलाई २ घन्टा मनोरन्जन दिलाउने हो । निर्देशकको रुपमा मैले अभिव्यक्त गरेको कुरालाई दर्शकले गम्भिररुपमा सोचिदिउन भन्ने मेरो इच्छा हो ।
नेपालमा बन्ने यस्ता फिल्मको मुख्य समस्या भनेको सम्बन्धित जातिय पात्र र संस्कृतिको सामाजिक जीवनलाई राम्रोसँग चित्रण नगरिनु थियो । यो खतरबाट ‘घामपानी’ कति मुक्त छ ?
टाइम फ्रेमभित्र रहेर हामीले पात्रलाई जीवन्त बनाउने प्रयास गरेका छौं । पात्रसँग जोडिएर आउने उसको सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक र मनोविज्ञानलाई सकेसम्म विश्वसनिय बनाउने प्रयास गरेका छौं । एउटै टोलमा बस्ने भएपनि उनीहरुको मनोविज्ञान, संस्कृति, खानपिन, घरको बनावट, इन्टेरियर, एक्सटेरियरमा मैले मिहेनत गरेको छु ।
‘घामपानी’ निर्माता, बजार वा अन्य प्रभावहरुको उत्पादन हो वा तपाईंको विशुद्ध सिर्जनात्मक योगदान र लगानी छ ?
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा फिल्म भनेको निर्देशकले मेरो एक्लो अभिव्यक्तिको माध्यम हो भनेर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिले नेपालमा सत्तरी असी लाख लगानी गर्नु भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो । पैसा जुटाउन गाह्रो हुन्छ । मैले चारवटा कम्पनीको सहकार्यमा फिल्म बनाएको हुनाले चारजनाकै चारथरी अपेक्षा हुन्छ । ती अपेक्षा पुरा गर्न विभिन्न थरीका कम्प्रमाइजहरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कलाकार छनौट, विषयवस्तु उठान, फिल्मलाई वास्तविक बनाउने कि व्यवसायिक गर्ने कि, म्युजिकल वा ह्युमरस बनाउने कि विषयमा निर्देशकको पूर्ण नियन्त्रण हुँदैन ।
‘घामपानी’ कबड्डी सिरिज र पुरानो डुंगाकै अर्को संस्करण हो वा संरचना वा मनोविज्ञानका हिसाबले ती दुईटा भन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ ?
‘कबड्डी’ र ‘पुरानो डुंगा’मा स्टोरी टेलिङ जुन यथार्थ छ, ‘घामपानी’मा पनि रियालिस्टिक नै छ । यसमा हामीले फेन्टासीहरु देखाएका छैनौं । एउटा हिरोले १० वा १५ जना गुन्डालाई कुट्ने खालको दृश्य पनि छैन । हिरो-हिरोइनले गीत गाएर रुख वरपर नाच्ने, बगैंचामा नाच्ने गीतहरु पनि छैन । ‘कबड्डी’ र ‘पुरानो डुंगा’सँग जोडेर हेर्नुको कारण यसका कार्यकारी निर्माता रामबाबु गुरुङ हुनुहुन्छ । आफू तामाङ भएको हुनाले मैले तामाङ गाउँको कथा उठाएको छु । कतिपय कथाहरु उस्तै हो कि भन्ने खालको पर्न पनि सक्छ । तर, दुईटा फिल्मभन्दा फरक छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ दिन्छु ।
राम्रा कथावस्तुमा बनेका सानो बजेटका ‘घामपानी’जस्ता फिल्महरुको चुनौति के हो ? यस्ता फिल्मले बजारको दबाबमा आफ्नो अस्तित्व कसरी निर्माण गर्छन् ?
‘घामपानी’ महंगै बजेटको हो । दयाहाङ र केकी अधिकारीको बजेट पनि महंगै हो । शैलेन्द्र डी कार्की नेपालकै महंगा क्यामेराम्यान हुन् । निर्देशक र लेखकको रुपमा मैले पनि राम्रै पारिश्रमिक लिएको छु यसमा । यसकारण कलाकार, प्राविधिक सबैको पारिश्रमिक जोड्ने हो भने सस्तो बजेटको होइन । विगतमा फिल्म समिक्षा गर्थेँ । तर, उक्त परिचयले फिल्म कमर्सियल्ली सफल हुन प्रशस्त छैन किनभने विगतमा मैले फिल्म बनाएको छैन । मेरो नामले दर्शक फिल्म हेर्न आउँछन् भन्ने भ्रम चाहिँ ममा छैन । ट्रेलर हेरेर जति दर्शक प्रभावित हुन्छन्, उनीहरुले फिल्म हेर्ने हो ।
फिल्म समिक्षाले फिल्म निर्देशन गर्न कसरी सहयोग पु¥याउँछ ? फिल्म क्रिटिक्स बन्नु र निर्देशक बन्नु भनेका कस्ता कुरा हुन् ?
गम्भिरतापूर्वक फिल्म निर्देशन गर्ने हो भने देशी विदेशी फिल्म हेर्नुपर्छ । भारत, चीन, फ्रान्स, इरान, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिकाका शाष्त्रिय फिल्म हेर्नुपर्छ । ती फिल्महरु के कारणले गर्दा संसारमा गणनायोग्य भए भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा फिल्मको सैद्धान्तिक पक्षको धेरै ज्ञान हुन्छ । मैले पनि थोरबहुत नलेज हासिल गरेँ । त्यो नलेजले मलाई फाइदा चाहिँ पुगेको छ । फिल्म समिक्षा गर्नु र फिल्म निर्देशन गर्नु अलग कुरा हो । कुुखुराले फुल पार्नु र त्यो फुलबाट अमलेट बनाउनु भनेको अलग कुरा हो । सम्बन्धको नाताले मैले फिल्म बनाउन पाएँ । नत्र फिल्म बनाउन क्रिटिकले सजिलै बनाउन सक्दैन बाहिर चाहिँ ।
तपाईंसँग कस्ता सैद्धान्तिक आधार छन् जसले गर्दा दर्शकले ‘घामपानी’ हेर्नुपर्छ ?
मैले जतिसुकै सिद्धान्तको कुरा गरेपनि त्यसमा दर्शकको रुचि नहुनसक्छ । दर्शकले मलाई सुरुमा दीपेन्द्र लामा भनेर समिक्षकको रुपमा स्वीकारे । मैले फिल्म समिक्षा गर्दा पाठकबाट उत्साही हुने खालका प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्थ्यो । दीपेन्द्र लामाले निर्देशकको रुपमा कस्तो काम गरेको छ भनेर जान्न मन लागे फिल्म हेर्दा राम्रै हुन्छ । यो एउटा प्रोसेस पनि हो । क्रिटिक कसरी फिल्म निर्देशनमा आए भनेर प्रोसेसको अध्ययन गर्न चाहनेलाई पनि घामपानी फिल्म हेर्न जरुरी छ । दीपेन्द्रले सुरुमा राम्रो समिक्षा लेख्थ्यो र घामपानी पनि राम्रै बनाएको छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ म दिन्न । त्यो दर्शकले नै समिक्षा गर्ने कुरा हो ।
राजु लामालाई ३२ प्रश्न : २५ वर्षपछि मंगोलियन हार्टको कमब्याक
५० लाख लिएकै हुँ तर आफैलाई स्टार ठान्दिँन : अनमोल केसी (संवाद)
‘आठ कक्षा पढ्दा उहाँको फिल्म हेँरे, कायरामा रोमान्स गरिएला भन्ने सोचेकै थिइँन’ (भिडियो)